Qorshe 5-Tallaabo ah oo lagu Kordhiyo Meheraddaada Dukaanleyda. | Martech Zone
Sida laga soo xigtay Statista, 2016, 177.4 milyan oo qof ayaa aaladaha mobilada u adeegsaday dukaan, cilmi baaris iyo dhirtuba alaabooyinka. Tiradan waxaa la saadaalinayaa in ay gaarto ku dhowaad 200 milyan sanadka 2018. Iyo warbixin cusub oo ay sameeyeen Cinwaan taas ayuu daliishaday Ka tagida gaadhigu waxay gaadhay heer dhexdhexaad ah oo ah 66% ee Maraykanka.
Tafaariiqleyda khadka tooska ah ee aan bixin waayo-aragnimo moobiil oo weyn waxay u badan tahay inay ku seegaan ganacsiga. Waa lama huraan inay ku sii hayaan dukaamaysanayaashu inay ku mashquulsan yihiin dhammaan nidaamka lacag-bixinta. Hoos waxaa ku yaal 5 waxyaabood oo tafaariiqleyaashu ay sameyn karaan si ay ugu hagaajiyaan foomamka websaydhka ah ee kuwa wax iibsada.
Isticmaal Baararka Horumarka - Adoo u oggolaanaya macaamiishaada inay arkaan qaybta ka mid ah nidaamka lacag-bixinta ay dhammaystireen iyo waxa weli soo socda, kaliya ma aha inaad ka saareyso jahwareerka, adigoo u sheegaya iyaga inta ay qaadaneyso, laakiin waxaad sidoo kale u oggolaaneysaa inay isu diyaariyaan tallaabada xigta . Tani waxay u oggolaanaysaa iyaga fursad ay ku helaan faahfaahinta lacag-bixinta ama foojarrada hadiyadda oo diyaar ah.
Khaladaad Yar oo Farsamada Nooca Hore ah - Buuxinta foomamka onlaynka ah waxay noqon kartaa mid waqti badan qaadata sida uu sheegayo machadka Baymard, celcelis ahaan ka tagista gaadhigu waa 69.23% sababo la xiriira hababka lacag bixinta oo aad u adag. Tan kor ku xusan, Mobile Commerce Daily waxay dhowaan sheegtey in 47% ay ka tagayaan wax iibsiga mCommerce maxaa yeelay nidaamka lacag bixinta waa mid aad u dheer. Mid ka mid ah habka ugu weyn ee lagu yareyn karo waqtiga iyo dadaalka ka bixitaanka ayaa ah iyada oo la hirgaliyo qalab lagu xaqiijiyo cinwaan caqli gal ah oo dadka wax iibsada siinaya kalsooni in xirmadooda timaad waqtigeeda oo qalad-la'aan. Waxay sidoo kale ka caawineysaa ka fogaanshaha ka tagida gaariga iyadoo macaamiisha ka dhigeysa inay diirada saaraan dhameystirka nidaamka lacag bixinta.
Adeegso Meelaha iyo Calaamadaha Iswaafajinta - Meeleynta calaamadaha kor ku yaal foomamka foomka ayaa inta badan ka waxtar badan marka la barbar dhigo dhinacyadooda maaddaama ay fududahay in lagu eego aaladaha moobaylka. Tani waxay ka saareysaa baahida loo qabo in la rogrogo ama la weyneeyo.Waa muhiim in la hubiyo in aagagga la calaamadeeyay, u oggolaanaya macaamiisha inay fahmaan macluumaadka ay u baahan yihiin inay galaan. Tan waxaa lagu sii wanaajin karaa iyadoo lagu daro tusaale, kaas oo si gaar ah u shaqeyn kara markaad u baahan tahay qaab gaar ah, tusaale MM / DD / YY.
Hel Xaqa Cabirka - Dhamaanteen waan ognahay in cabirka shaashadda taleefanka gacantu uu dhib noqon karo mararka qaarkood. Tani waa run gaar ahaan marka la galayo faahfaahinta foomamka shabakadda, waxayna sababi kartaa khaladaad la soo galo, ama si shil ah u riix xiriiriyeyaal naga kaxeyn kara goobta wax lagu iibsado. wax ka qabashada arrintan, iyo in la hubiyo in dadka wax iibsanaya ay leeyihiin khibrad macmiil oo si isku mid ah u weyn, ha ahaato wax ku adeegashada moobilka ama miisaska. Tan waxaa lagu gaari karaa iyadoo si otomaatig ah loo cabbiro foomamka foomamka iyo badhannada cabbirka shaashadda moobiilka. foom ku sameeya xarriiq kasta oo cinwaanka ah. Foomku wuxuu umuuqdaa mid ka fudud kana cabsi badan natiijada.
Burcad Kiiboodhka Khuseeya - Ku dar sifooyinka saxda ah ee lambarka HTML si aad u hesho kiiboodhka ugu habboon qaabka soo gelinta. Hubso in aaggu si sax ah u calaamadeeyay si loo yareeyo culeyska garashada oo loo sameeyo habka soo gelitaanka macluumaadka mid jilicsan. Tilmaan kale waa in laga joojiyo biraawsarka mobilada kelmadaha toosinta. Tani waxay muhiim u tahay kiisaska tusaale ahaan, magaca dariiqa aan loo aqoonsan inuu yahay eray sax ah.
Tags: calaamadahaganacsigagaari guurguurajeega wareegaganacsiga gacantakombiyuutarka elektarooniga ahtaleefanka gacantacabirka shaashadda moobiilkagaadhiga guurguura ee moobiilkabaararka horumarkacabbirka sawirkameelaha kore-safka ahtikniyoolajiyad nooca-hore ah
Tom Mucklow ayaa hogaaminaya Cinwaan koox bixiya xalal dhammaystiran oo wax ku ool ah oo ku saabsan dukaamaysiga internetka iyo jahwareerka keenista ee Mareykanka Nidaamka xaqiijinta cinwaanka jarista wuxuu hagaajiyaa oo hagaajiyaa nidaamka lacag bixinta ee tafaariiqleyda internetka iyo macaamiishooda iyagoo si toos ah u buuxinaya macluumaadka cinwaanka, soo koobista natiijooyinka cinwaan kasta, iyo xaqiijinta xogta cinwaanka saxda ah ee in ka badan 240 dal oo adduunka ah. Maadaama uu yahay hogaamiyaha cinwaanka, Tom wuxuu u shaqeeyaa inuu u gudbiyo qiimaha-keydinta, khibrada isticmaale, iyo faa iidooyinka tayada leh ee tiknoolajiyada xaqiijinta cinwaanka saadaalinta ee ganacsiyada Mareykanka oo dhan.